अर्बपतिसँग हो ? आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिस्पर्धा - Jerung Films
अर्बपतिसँग हो ? आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिस्पर्धा
wwwjerungfilmswwwjerungfilms 17 May 2019
२०३५–३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले अकण्टक भनिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जनमत संग्रहमा पुर्‍याएको थियो । पञ्चायतको विरुद्धमा मत हाल्न विद्यार्थी–युवाले देशव्यापी कार्यक्रम प्रचार–प्रसारलाई तीव्रता दिएका थिए । त्यही सिलसिलामा मदन भण्डारीसँग मेरो भेट भएको हो । विराटनगरको ह्वाइट हाउस अघिल्तिर ।
भोलिपल्ट विराटनगरको सहिद मैदानमा आमसभाको कार्यक्रम थियो । अघिल्लो दिन उहाँसँग भेट भएको थियो । २०३६ साल वैशाख १२ गते ।
त्यतिखेर विकसित सामाजिक चेतनाचाहिँ सामाजिक सुधारको प्रक्रियालाई पनि आन्दोलनको हितमा उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने थियो । तर, अतिवाद भन्थ्यो– पञ्चायत बाघ हो भने, बहुदल ब्वाँसो हो । यी दुवैबाट पन्छनु नै सच्चा क्रान्तिकारिता हो । विद्यार्थी आन्दोलन तत्कालीन सामाजिक चेतना र मनोविज्ञानसँग आमुन्नेसामुन्ने थियो । कतिपय सबाल र दृष्टिकोणले उसले समाजअनुकूल आफ्ना धारणा निर्माण गर्न सक्थ्यो । २०३५–३६को आन्दोलन त्यसैको कडी थियो ।
विद्यार्थीको उक्त निर्णयप्रति मदन भण्डारी आलोचनात्मक हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि अनेरास्ववियू त्यतिबेलाको एकताको पाँचौँ गुट निरपेक्ष हुनाले खासै प्रभाव पर्दैनथ्यो । त्यतिबेलाको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अतिवादी वैचारिक धारा हावी थियो । अझ भनौँ न कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह नै त्यो थियो । प्रजातान्त्रिक सुधारलाई ‘सुधारवाद’ भन्थ्यो र नाक खुम्च्याउँथ्यो ।
तर, पार्टी आन्दोलनको अवस्था अलिक फरक थियो । सामाजिक संसर्ग थिएन । समाजमा विकास हुँदै गरेका वैचारिक धाराहरूसँग आमुन्नेसामुन्ने हुन पाएका थिएन । त्यसकारण ऊ अतिवादी धारामा थियो । आफ्ना विचार र दृष्टिकोण समाजका आवश्यकतासँग जाँच्नै पाएको थिएन ।
पार्टी भूमिगत हुनाले पार्टीका नेता–नेतृत्वसँग सहज पहुँच थिएन । भेटघाटैसमेत हुन मुस्किल थियो । कम्युनिस्ट, त्यसमाथि पनि भूमिगत पार्टीका नेता भन्नेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा एकखालको विम्ब तयार हुन्थ्यो । तर, मदन भण्डारीलाई भेटेपछि त्यो विम्ब प्रतिस्थापन भयो । उहाँ अन्य भूमिगत नेताजस्तो हुनुहुन्नथ्यो । आजको शैली र भाषा टिप्ने हो भने, सुकिलो–मुकिलो नै देखिनुहुन्थ्यो ।
त्यसको सोझो कारण छ– माले आन्दोलन विशेषतः दुई धार मिलेर बन्यो । एउटा, कोअर्डिनेशन केन्द्र (झापा आन्दोलन), अर्को मुक्ति मोर्चा समूह । झापा संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूलाई निकै कठिन थियो । प्रशासनको निगरानी, धरपकड हुनेहुनाले बच्न अनेक बहाना गर्नुपथ्र्यो । त्यसको तुलनामा मुक्ति मोर्चाका नेताहरू कम चनाखो र सतर्क भए पुग्थ्यो ।
यहाँनेर स्मरणीय हुन्छ– कम्युनिस्ट आन्दोलनमा झापा संघर्ष नै त्यस्तो कडी हो– जसले आन्दोलनलाई आधारभूत तह र वर्गकै बीचमा पुर्‍यायो । जनतासँगको उठबस, खा, हिँड्सम्मै पार्टीलाई पुर्‍यायो । सिमान्तकृत वर्ग र समुदायका बीचबाट पार्टी आन्दोलनलाई उठाएर ल्यायो ।
झापा जिल्ला कोअर्डिनेशन (माक्सवादी, लेनिनवादी, मोरङ जिल्ला कोअर्डिनेशन कमिटी हुँदै माले आन्दोलनतिर कम्युनिस्ट आन्दोलन विस्तार हुँदै गर्दा पार्टी आधारभूत वर्गबाट पाखा लाग्दै गयो । आन्दोलनमा सिनर्जिक प्रभावमात्रै बढ्यो ।
मदन भण्डारीको व्युत्पत्ति
२०३५–३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीति, खास गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको कोर्स बदलिन थाल्यो । अब हिजोकै एकदलीय निरङ्कुशताको बाटो समातेर मात्रै गन्तव्यमा पुगिँदैन भन्ने विचार बहसमा आउन थाल्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र प्रजातान्त्रिक आयातन फराकिलो बन्न थाल्यो ।
माथि नै उल्लेख गरिएको ‘पञ्चायत बाघ हो भने बहुदल ब्वाँसो हो’ भन्ने विचारधारा पार्टीभित्र खारेज भइसकेको अवस्था थियो । त्यतिबेला खास गरेर पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता भनेर अन्तरसङ्घर्ष चुलियो । राजनीतिक स्वतन्त्रता र पार्टी स्वतन्त्रतामा तात्विक अन्तर देखिँदैन । रूप फरक होला, सार एउटै हो ।
राजनीतिक स्वतन्त्रतावालाहरू तत्कालीन रूपमा गणतन्त्रको अपेक्षा राख्थे । पार्टी स्वतन्त्रताका पक्षधर शक्तिहरू गणतन्त्र रणनीतिक लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि अहिले नै प्राप्त गरिहाल्ने अवस्था छैन । यसकारण कि, कांग्रेस राजतन्त्रसँग घाँटी जोडिएको छ भन्थ्यो । मालेले गणतन्त्रको रुझान त बोकेको छ । तर, ऊ भूमिगत छ । विद्यार्थीबाहेक सामाजका अन्त तह र तप्कामा उसको उपस्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलन सफलिभूत हुन सक्दैन । यसर्थ बहुदलीय प्रजातन्त्र मिलनविन्दू हुन सक्छ भन्ने त्यो विचारधाराको दृष्टिकोण थियो ।
यो विचारधाराले वामप्रगतिशील घेरा सुरक्षित राख्दै पार्टी स्वतन्त्रताको कुरा उठायो । पार्टीभित्र प्रश्न घनिभूत भएर आइहाल्यो– “पार्टी स्वतन्त्रताको कुरा त कांग्रेसले पनि उठाइरहेकै छ नि ? हामी कांग्रेसभन्दा के भिन्न भयौँ त ?” यो अन्तरसङ्घर्षले मदन भण्डारीको दृष्टिकोणलाई बलियो बनाउँदै लग्यो ।
तर नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्भाग्य पनि त्यहीँबाट शुरू भएको हो । त्यसअघि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आन्तकेन्द्रित व्यक्तिवाद हावी भएको थिएन । म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने भावना कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जागृत भएको थिएन । पार्टीभित्रै अर्को वर्गको उदय हुने खतरा त्यसअघिको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको थिएन । तिनताकसम्म पार्टीका नेता आन्दोलनका वारिस (प्रतिनिधि) मात्र थिए । आन्दोलनका निर्देशक थिएनन् । आन्दोलनको वारिस त कमिटी थियो । प्रणाली थियो । अझ भनौँ न, संस्था थियो ।
०३९ पछाडि म नै संस्था हुँ । म नै आन्दोलन हुँ । म नै क्रान्ति हुँ । म नै चेतना हुँ । समस्याको उपचार आन्दोलनले होइन मैले दिने हुँ भन्नेजस्ता यावत् प्रवृत्ति झाँगिदै, उदांगिँदै गयो ।